Ungayifumana njani iakhawunti yeTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 296
I-Twitter yenye yezona ndawo zibaluleke kakhulu kuthungelwano lwentlalo namhlanje, ezinomtsalane kwiindlela ezimbini zonxibelelwano.
Ukonwabela izibonelelo zeakhawunti ye-twitter kuxhomekeke kwindlela oziva ukhululeke ngayo kwinethiwekhi yoluntu. Abantu abaninzi, ngamanye amaxesha, bebengonwabanga ngendlela esebenza ngayo i-twitter.
Isantya esingaguquguqukiyo kunye nohlaziyo lweetweets, ngolwazi olungapheliyo lunokubothusa abanye abantu. Ngamanye amaxesha, abantwana okanye abantu abadala abadala babhalise idatha yabo kwi-twitter kwaye emva koko bagqibe kwelokuba bavale iiprofayili zabo, ngokungabi yile nto bebeyilindele kwi-twitter.
Nokuba kungenxa yokuba bengaziqhelanga i-nanoblogging okanye bengazi ukuba bangaqhelana nesingqisho esisebenza ngayo i-Twitter, baziva isidingo sokuvala iiakhawunti zabo.
Kwezi meko, ukumiswa kweeprofayili zabo kuyakhawuleza, ngokukhawuleza njengokuzifumana kwakhona.
Ngokuhlaziywa kweqonga ngalinye, inkqubo yenzelwe ukwenza ubomi bube lula kumsebenzisi Kule nkqubo, yiyo loo nto iphuhlise iindlela ezikhawulezayo nezisebenzayo zokufumana iiakhawunti ezinqunyanyisiweyo.
Kuya kufuneka uyazi:
Ukufumana iakhawunti ye-twitter yinkqubo elula kakhulu. Ngokuyinxenye, kuba iqonga lifuna ukuba, ukuba kwezinye iimeko, uthathe isigqibo sokubuyela, ilula kwaye ikhawuleze ngokwaneleyo, ukuze ungatshintshi ingqondo yakho.
Konke kuqala ngokwazi ukuba wakube ucime iakhawunti yakho, unokuyifumana kwakhona ngeentsuku ezingama-30 eziqhubekayo emva kokuba icinyiwe. Nje ukuba eli xesha lidlule, ekuphela kwendlela oza kuthi uyinike iqonga uya kuba kukubhalisa kwakhona, ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Ngokuqinisekileyo uya kulahleka nayiphi na indlela yokubuyisela abalandeli bakho, iifayile kunye nemiyalezo oyishiye kwiakhawunti yakho.
Kufuneka wenze ntoni?
Yiya kwiphepha le-twitter elisemthethweni okanye ufake usetyenziso lwenguqulo. Kuya kufuneka ungene ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha obukade unalo ngaphambi kokuvula iakhawunti yakho.
Nje ukuba ungene, iphepha liya kukucela ukuba uqinisekise ukubuyiswa kweakhawunti yakho, ekufuneka uyamkele.
Nje ukuba ube nakho ukungena, inkqubo yokufumana kwakhona yonke idatha yakho iya kuqala. Tweets kunye nabalandeli ingakumbi. Umsebenzi omninzi owenziwe yiakhawunti ngexesha lokuphila kwayo, ixesha elide lokufumana liya kuba lide.
Ukuqwalaselwa kokuthathelwa ingqalelo kokubuyiselwa kweprofayili yakho
Kwiimeko ezithile, abasebenzisi baye bahlupheka ngokunqunyanyiswa kunye nokupheliswa kweeakhawunti ngabantu besithathu. Abantu banokufumana ukubonwa kwesazisi okanye ukubiwa kweakhawunti. Ukulungiselela le nto, inkqubo ye-twitter ilungiselelwe.
Kwimeko apho ukhe wahlangabezana nenye yezi ngxaki, kuya kufuneka unxibelelane nenkonzo yoncedo lwe-twitter. Igosa lenkxaso liya kukunika lonke uncedo olufumanekayo.
Iarhente iya kuvavanya ityala lakho, kwaye ukuba ngenene, ube lixhoba layo nayiphi na inkqubo engekho mthethweni yomnye umntu, iya kukuvumela ukuba ubuyise iakhawunti yakho, ke kuya kufuneka ube nayo yonke ulwazi olugcine kwiakhawunti yakho, ngakumbi i-imeyile kunye negama lokugqitha, phakathi kwezinye iinkcukacha.
1 Kuya kufuneka uyazi:
2 Kufuneka wenze ntoni?
3 Ukuqwalaselwa kokuthathelwa ingqalelo kokubuyiselwa kweprofayili yakho
Ndihamba njani ngokubeka i-Instagram yam kwimo emnyama?
Uyifaka njani iTelegram kwiPC?